အမွေအနှစ်တခုဖြစ်သည့် Long Beach Blue အား 2021 Acura NSX တွင်ပေါင်းစပ် ထည့်သွင်းမည် - Drive Myanmar
Drive Myanmar > News > News > International News > အမွေအနှစ်တခုဖြစ်သည့် Long Beach Blue အား 2021 Acura NSX တွင်ပေါင်းစပ် ထည့်သွင်းမည်
အမွေအနှစ်တခုဖြစ်သည့် Long Beach Blue အား 2021 Acura NSX တွင်ပေါင်းစပ် ထည့်သွင်းမည်
Acura သည် NSX Model အသစ်အတွက် ထူးခြားသည့် အမွေအနှစ်လက်ရာဖြစ်သည့် Long Beach Blue Color အား ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားပါမည်။ အဆိုပါ Special Color အား 2002 Model NSX တွင်လည်း ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ယခု 2021 NSX Model တွင် အဆိုပါ ဆေးရောင်အပြင် ( Indy Yellow ) နှင့် ( Thermal Orange ) ကဲ့သို့ထူးခြားသည့် ဆေးရောင်များ လည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အထူးထုတ် ဆေးရောင်များသည် မျက်စိ အမြင်ကို ထူးခြားစေ သည့် အရောင်ရောစပ်မှုနှင့် ကျကျနန ဖန်တီးခြင်းကဲ့တို့ လက်ရာများပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ 2021 Acura NSX တွင် (3.5 L Turbocharged V6 Engine ) ၊ ( 573 hp ) အင်ဂျင်နှင့် (9-Speed Dual-Clutch Auto gear) တို့နှင့်အတူ လျှပ်စစ်မော်တာ (၃)ခုတွဲဖက်ထားပါသည်။ အဆိုပါ ဓာတ်ဆီနှင့် လျှပ်စစ်ပေါင်းစပ်မှုတွင် Total Output အနေဖြင့် – (573 hp Output) (476 lb-ft of Torque ) ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ Performance အနေဖြင့် – (0to 60 mph ) အား ( 3.0 Seconds ) ဖြင့် အမြန်ဆုံး ရောက်ရှိပါမည်။ Acura သည် 2021 NSX Model အား 2021 နှစ်ဦးပိုင်းတွင် စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး U.S.A ဈေးကွက်အတွက် ဈေးနှုန်းသည် ( USD 160,000)မှ စတင်မည် ဖြစ်သည်။ ( White / Curva Red / Berlina Black ) ဆေးရောင်တို့အတွက် ဈေးနှုန်းထပ်မံ ကျသင့် ပါမည်။ Acura သည် မူလပထမဖြစ်သည့် Long Beach Blue အား 2022 – 2005 အတွင်း ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် NSX တွင် အစင်းရေ(၈၈)စင်း သီးသန့်သာ ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး အထူးထုတ် အဖြင့် ရောင်းချခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ Special Model များသည် ထိုခေတ်က NSX Model များတွင် အရှားပါးဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
2021 Acura NSX (CNW Group/Honda Canada Inc.)
2021 Acura NSX Celebrates Motorsports and Heritage in Long Beach Blue Pearl
PREVIOUS 20 Nov 2020
Electric Version ဖြင့်ထွက်ရှိလာသည့် 2022 Ford E-Transit
NEXT 23 Nov 2020
Hyundai သည် အနာဂတ် EVs များကို ထုတ်ဖော်ပြသခြင်း
Ducati Myanmar မှ New Mutistrada V4 ကို ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်း...
အခမ်းအနားဆုံး အခင်းအကျင်းဖြင့် တွေ့မြင်ရမည့် 2021 Mercedes – Maybach S...
Honda Legend တွင် Level3အဆင့်ရှိသည့် Autonomous System...
Archive Select Month November 2020 October 2020 August 2020 July 2020 June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016
adventure Advertorial Audi bike BMW Buyer's Guide Car Review cars Classic Tribute comparison education Event featured Ford Hyundai International News Jaguar KIA local news local updated Luxury car maintenance Mazda mcoty-2017 mcoty-2018 MCOTY-2019 mcoty2019 mercedes Mitsubishi new car New Model News New Technology Nissan promotions Range Rover / Land Rover society SUV Technology Test Drive Toyota Travel Video Volkswagen Volvo
Ducati Myanmar သည် နည်းပညာသစ်များပါဝင်သည့် လူကြိုက်များရေပန်း စားဆုံး စတုတ္ထ မျိုးဆက် New Mutistrada V4 ကို ပြည်တွင်း...
Mercedes-Benz အတွက် အကောင်းဆုံး ဇိမ်ခံကားဖြစ်သည့် Mercedes-Maybach သည် 2021 Maybach S 580 အနေဖြင့် ထူးခြားစွာ ထွက်ရှိလာပါသည်။...
Honda သည် Level3Autonomous System အား Mass Produce အနေဖြင့် ထည့်သွင်းမည်ဟု ကြေငြာလိုက်ပါသည်။ Level...
DRIVE is the leading Myanmar Car Media and Myanmar Car Magazine, covering the latest cars in Myanmar, trends and happenings locally and internationally.
DRIVE is here to tell Myanmar how to get the most from your car and your driving experience and in particular the image and feeling thatacar confers. We invite you to become one of the cognoscenti. You want to know all there is to know about cars? Read DRIVE
Drive ဆုိတာေနာက္ဆုံးေပၚကားေတြ၊ကားေလာကရဲ႕ဦးတည္ရာေတြ၊ေနာက္ျပီးျပည္တြင္းနဲ ႕ႏုိင္ငံတကာ ကားေလာကမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနသလဲဆုိတာကုိ ေဖာ္ျပေပးေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕တစ္ခုတည္းေသာ ကား မဂၢဇင္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ Drive ကဒီေနရာကေနျပီးေတာ့ သင့္ကားအတြက္ဘာေတြအမ်ားဆုံးရရွိႏုိင္မလဲ၊သင့္အတြက္ ကားေမာင္းႏွင္ မွဳအေတြ႔အၾကံဳစတာေတြကုိ ဓါတ္ပုံေတြနဲ႕ခံစားႏုိင္မယ့္ ကားေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး ပဲြတစ္ခုအသြင္ေဆာင္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ကားနဲ႕ပတ္သက္လုိ႔ႏွံ့႔စပ္က်ြမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစဖုိ႔ဖိတ္ေခၚလုိက္ရပါတယ္။သင့္အေနနဲ႕ကားနံ႕ပတ္သက္တာေတြအားလုံးသိလုိပါသလား။Drive ကုိဖတ္လုိက္ပါ။
For more details, please contact us on
Phone : +95 (0)9 779 003702
See our printed publications here https://issuu.com/drivemyanmar
© 2019 Myanmore Media GroupTrademarks and brands are the property of their respective owners.